Into enhle ngobuciko ukuthi iphiwa noma ubani. Kulevidiyo sibona abantwana abancane basendaweni yaseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Laba bantwana abawudansa kahle kangaka lo mdanso we cha-cha bafundiswa uSisi uDoris wasendaweni yakhona eMagabheni, ofundisa mahhala. Ngenkathi simbuza ukuthi yini ndaba esebenzisa isikhathi sakhe enikela ngethalente lakhe, uSis Doris wasitshela ukuthi: “Size lapha emhlabeni ukuzokwenza umehluko. Anginakho okuningi kepha … Read more